International Archives - Page6of 62 - Popular
သရုပ်ဆောင်အဖြစ် မြင်တွေ့ရတော့မယ့် Jessica
Jessica ဟာ အနုပညာလော ဘကြီးသူလို့ ဆိုရမလားကွယ်။ သူ့သီချင်းတွေက စဉ်ဆက် မပြတ်ထွက်ရှိနေသလို အခုလည်း US မှာ မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Ilgan Sports နဲ့ အင်တာဗျူး မှာ သူ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က…
စင်ကာပူ ရှိုးပွဲမှာ Jonghyun အတွက် အမှတ်တရ သီချင်းသီဆိုခဲ့တဲ့ IU
သူဖျော်ဖြေတင်ဆက်မယ့် သီချင်းတွေထဲမှာ Modern Times သီချင်းမပါဝင်ခဲ့ ပေမယ့် Jonghyun ရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်ကို လွမ်းဆွတ်တဲ့အနေဖြင့် အခုလို ပြောင်းလဲ သီဆိုခဲ့တာပါ။ IU ဟာ သီချင်းမဆိုခင်မှာ . . .
ဟာရှီဗာဒန် ကင်မ်ရှားရမာတို့ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလို့ ဆို
ဘောလိဝုဒ်မင်းသား ဟာရီဗာဒန်ရာနီနဲ့ ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီးမော် ဒယ်လ်ကင်မ်ရှား ရမာတို့ နှစ်ဦးချစ်သူတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်က ဖော်ထုတ် ပြောဆိုလိုက်ကြလို့ ဘောလိဝုဒ်အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ လူပြောသူပြော များနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။အစပိုင်းကာလတွေကတော့ နှစ်ဦးသားက...
အာရီယားနား ဂရန်း ဒေရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်မန်ချက်စတာ ဖျော်ဖြေပွဲ၂ဝ၁၉ မှာ ပြုလုပ်မည်
ကျွန်မတကယ်ပြန်လာပါပြီ၊ ရှင်တို့ကိုချစ်ပါတယ်''ဆိုပြီး အာရီ ယားနားဂရန်း ဒေက သူ့ရဲ့အင်စတာ ဂရမ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ကျင်းပမယ့်မြို့တွေကတော့လန်ဒန်၊ ဘာမင်ဂမ်၊ ဂလပ်စကို၊ ရှက်ဖီးလ်တို့ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လကနေ စက်တင်ဘာလအထိ ကျင်းပသွားမယ့် အကြောင်း သိရပါ…
ဖော့ဘ်စ် မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်အတွင်း အချမ်းသာဆုံးအမေရိကန်ဆယ်လီ စာရင်းထွက်ပေါ်လာ
နှစ်တစ်နှစ်လုံးရဲ့ အပြီးသတ် ရွေးချယ်တဲ့ ဖော့ဘ်စ်ရဲ့စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ခိုင်လီဂျန်နာအဖို့ ဒီတစ်ကြိမ်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း သူ့အနေနဲ့ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ခိုင်လီတစ်ယောက် ဒီလိုကြွယ်ဝလာရတဲ့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းက...
စင်ကာပူ ရှိူးပွဲမှာ Jonghyun အတွက် အမှတ်တရ သီချင်းသီဆိုခဲ့တဲ့ IU
သူဖျော်ဖြေတင်ဆက်မယ့် သီချင်းတွေထဲမှာ Modern Times သီချင်းမပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် Jonghyunရဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်ကို လွမ်းဆွတ်တဲ့ အနေဖြင့် အခုလိုပြောင်းလဲသီဆိုခဲ့တာပါ။IU ဟာသီချင်းမဆိုခင်မှာ သူအရမ်းလွမ်းနေတဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက်ပါဆိုပြီး....
ချစ်သူအသစ်ရနေတာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ဘရွတ်ကလင်းဘက်ဟမ်းက ဝန်ခံပြောဆို
ပွဲကျင်းပရာနေရာကတော့ လန်ဒန်မြို့က တော်ဝင်ရွိုင်ရယ် အဲလဘတ်ခန်းမ မှာဖြစ်ပြီး ထူးခြားချက်အနေနဲ့ အဲဒီပွဲကို ဘရွတ်ကလင်းရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ် ဘတ်ဟမ်းနဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ဟမ်းတို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်တွေအရတော့ . . .
သရုပ်ဆောင် အမ်မလီဘလန့်ကို အက်အေဂျီရုပ်ရှင်ဆုအတွက် ဆုနှစ်နေရာ တပြိုင်တည်းလျာထား
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး အမ်မလီဘလန့်ကို မကြာခင်ပေးအပ်ချီးမြှင့်မယ့် အက်အေဂျီ ရုပ်ရှင်ဆု (Screen Actors Guild Award) အတွက် ဆန်ကာတင်ဆုနှစ်ဆု စာရင်းဝင်နေတယ်လို့ သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဆန်ကာတင်စာရင်းသွင်းရွေး ချယ်ခံရတဲ့ဆုတွေ ကတော့ . . .
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဘီလျံနာ သူဌေးတစ်ဦးရဲ့သမီးဖြစ်သူ မင်္ဂလာပွဲ ဘီယွန်ဆေး တက်ရောက် ဖျော်ဖြေ
အဆိုပါ မင်္ဂလာပွဲကို တက်ရောက်ချီးမြင့်ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်တွေက ဘီယွန်ဆေး တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဟီလာ၇ီ ကလင်တန်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလိဝုဒ်ကြယ်ပွင့်ပရီရန်ကာ ချိုပရာ နဲ့ နစ် ဂျိုးနပ်စ်တို့ကြင်စဦးမောင်နှံလည်း ဧည်သည်တော်အဖြစ်…
လမ်းခွဲသွားပြီလို့ သတင်းများထွက်ပေါ်နေတဲ့ Jun Hyun Moo နဲ့ Han Hye Jin
"I live alone" အစီအစဉ်မှာ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပုံမှန်အချိန်တွေထက် အေးခဲ့နေပြီး နှစ်ဦးစလုံးက သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ...
ကိုနေတိုးဆီကနေပညာတွေအများကြီးရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး 49 views
အကယ်ဒမီ ပိုင်ဖြိုးသု မသေခင်မှာ လုပ်သွားချင်တဲ့ အရာက ဘာလဲ 48 views
အသားအရေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်နေဖြစ်လဲ အိချောပို 41 views
ပန်းနုရောင်အလွမ်း 35 views